ခရက်ဒစ်ပုံသေလဲလှယ်ခွင့်အခွင့်အလမ်း - World Trade Exchange
ဗီဒီယို - ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ၁၀,၀၀၀% ရွယ်မည်သို့ရနိုင်သည်
ချေးငွေချေးငွေများလဲလှယ်ရေးကဏ္ MAR စျေးကွက်သည်ယခင်ဖန်တီးခဲ့သောအကြီးမားဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
ရာဂဏန်းနှင့်ရာထောင်ချီသောရာနှုန်းများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သောကြံ့ပြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ခရက်ဒစ်ပုံသေလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် (CDS) သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ၁၀၀၀၀% အမြတ်အစွန်းပေးသည့်ကြံ့မွေးမြူရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဒေါ်လာဘီလီယံရှိသောအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းဖန်တီးခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
Bill Ackman သည်ဒေါ်လာ ၂၇.၆ ဘီလျံရရှိသောချေးငွေကိုအကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Bill Ackman သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ မပြည့်မီ Credit Default Swap တွင်ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယံအမြတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ၁၀၀၀၀% အမြတ်အစွန်း (အဆငွေ ၁၀၀) နီးပါးအမြတ်အစွန်းရရှိစေသောအရံရန်ပုံငွေဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို Forbes ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ.
John Paulson သည်သူ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံနှင့်အမြတ်အစွန်းအဖြစ် ၄ ဘီလျံဒေါ်လာဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။
နယူးယောက်စောင်ရန်းရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Paulson & Company ကိုတည်ထောင်သူ John Paulson သည် Credit Default Swaps တွင်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး Paulson အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံဒေါ်လာပေးခဲ့သည်။ မစ္စတာပေါလ်ဆန်သည်သူ၏ရန်ပုံငွေ၏ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံကိုကိုယ်ပိုင်ယူခဲ့သည်။ သူဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ သူ၏ရန်ပုံငွေသည်အိမ်ခြံမြေတိုးတက်မှု၏အမြင့်ဆုံးအချိန်တွင်ချေးငွေပေါင်နှံသည့်ကြွေးမြီများနှင့် ပတ်သက်၍ ချေးငွေပျက်ကွက်မှုများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ subprime အကျပ်အတည်းရောက်သောအခါသူတို့၏တန်ဖိုးသည်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Kyle Bass နှင့်သူ၏ခြံရန်ပုံငွေသည်ချေးငွေပုံသေ swaps များဝယ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်အိမ်ရာဈေးကွက်ပြိုကျပြီးနောက်နာမည်ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Kyle Bass နှင့်သူ၏ခြံရံပုံငွေသည်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။
သင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ROI ၏ 10,000% ROI ကိုတက်နိုင်သလား WTE စီဒီများ!
Credit Default Swap တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀၀% ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အဆ ၁၀၀ သင့်ငွေကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ အကြွေးကို default swap သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် credit default swap သို့ဒေါ်လာ ၁ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် credit default swap သို့ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံရရှိလိမ့်မည်။
သင်ပျက်ကွက်နိုင်သည်၊ ဒေဝါလီခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားချေးငွေအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအကြွေး တင်၍ CDS ကိုဝယ်ခြင်းအားဖြင့်သင် ၁၀၀၀၀% ROI အထိရနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ သင် ABC ကုမ္ပဏီဟာဒေဝါလီခံခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ဖူးသဖြင့် ABC ကုမ္ပဏီမှ ABC ကုမ္ပဏီမှပေးအပ်သောဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံချေးငွေအပေါ် CDS ကို ၀ ယ်ရန်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ABC ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အမေရိကဘဏ်သို့အတိုးနှုန်းမပေးရန်ပျက်ကွက်ပါကသင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် WTE သင်၏ CDS ကို ABC ကုမ္ပဏီတွင်ရွေးရန်။ WTE ABC ကုမ္ပဏီမှပေးဆပ်ရမည့်ငွေပမာဏဖြစ်သောသင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပေးချေလိမ့်မည်။ ABC ကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီအတွက် CDS သို့ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀၀၀% ROI ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် XYZ ကုမ္ပဏီမှအမေရိကန်ဘဏ်သို့ပေးအပ်သောဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံချေးငွေဖြင့်ဒေါ်လာ ၁ မီလျံ CDS ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ XYZ ကပေးချေရန်ပျက်ကွက်လျှင်သို့မဟုတ်ချေးငွေအပေါ်ပျက်ကွက်လျှင်၊ WTE မင်းကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့ချေးငွေရဲ့အတိုးကိုပေးလိမ့်မယ်။
သင်ကြိုက်သလောက်များစွာသောကုမ္ပဏီများ၏အကြွေးများအပေါ် CDS တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ သင် CDS တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောကုမ္ပဏီအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အခြားကုမ္ပဏီများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ လေထုထဲမှ ROI ၁၀၀၀၀% အထိရနိုင်သည်။
မည်သူမဆိုချေးငွေလွှဲပြောင်းလဲလှယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်
Credit Default Swap တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၊ ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စောင်ရန်းရန်ပုံငွေမလိုပါ။
သင့်အနေဖြင့်နောက်ခံလုံခြုံမှုကိုပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ရည်ညွှန်းသည့်အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ အခြားကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီများအပေါ် CDS ၀ ယ်ရန် default event မှရှုံးနိမ့်စရာမလိုပါ။
သင်လောင်းသည့်ကုမ္ပဏီသည်အကြွေးပြန်မဆပ်နိုင်လျှင်သို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းမပေးလျှင်သင်စာအုပ်၏ ၁၀၀% ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးသို့မဟုတ်ဤချေးငွေ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးရရှိလိမ့်မည်။
WTE credit default swap သည်သင်၏ချေးငွေများနှင့်အခြားဘဏ္assetsာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုပေးချေမှုမရှိခြင်း၊ ပျက်ကွက်မှုများ၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းလျှော့ချခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်ရန်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ချေးငွေများနှင့်ဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများသည်မပြည့်စုံပါက၊ ROI မပေးပါ၊ မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုမဆိုခံရပ်နိုင်ပြီးတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်ကွက်လျှင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းစာအုပ်၏ ၁၀၀% ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးကို CDS မှရရှိမည်ဟုအာမခံသည်။